प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिमा किचलो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
खेलाडीलाई पनि उनी उत्तिकै मनपर्छ । खासमा नेपाली फुटबललाई उनी जत्तिको प्रशिक्षक नै चाहिन्छ
कार्तिक ६, २०७८ हिमेश
काठमाडौँ — भनेर भन्न सकिन्न । बुझेर बुझ्न सकिन्न । यस्ता छन्, अब्दुल्लाह अल्मुताइरी । कसैले भन्न सक्छ, नेपाली फुटबल टिम सम्हाल्न उनी फेरि नेपाल आउनेछन् । हुन सक्छ, उनी आउने नै छैनन् । फेरि कसैले भन्न सक्छ, उनी आउने छैनन् । बेर छैन, उनी आउनेछन् ।
हामीले त उनको मुखबाट यही सुनेको हो, ‘अब म नेपाल फर्किन्नँ । फाइनल नेपालका लागि मेरो अन्तिम खेल हुनेछ । मैले राजीनामा दिइसकें ।’ यस्तोभन्दा उनी खुबै जोसिएका पनि थिए ।
उनको आवाज पनि चर्को थियो । साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा बंगलादेशलाई बराबरीमा रोकेपछि नेपाल फाइनल पुगेको थियो । खेलपछि माल्दिभ्सको मालेस्थित नेसनल स्टेडियममा पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्स भएको थियो । त्यसमै सबैले बुझ्ने भाषामा उनले यस्तै भनेका थिए । प्रतियोगिताको इतिहासमै नेपाल पहिलोपल्ट फाइनल पुगेको थियो । निकै तनावपूर्ण परिस्थितिमा अञ्जन विष्टले पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए । यी दुवै उपलब्धि कम्तीका थिएनन् ।
तर अल्मुताइरीको नेपाल नफर्कंने घोषणाले ती दुवै उपलब्धि खाइहाल्यो । जबकि खासमा चर्चा हुनुपर्ने टिमको उपलब्धिमा थियो, प्रशिक्षकको एक भनाइले त्यो ओझेलमा पर्‍यो । फाइनल सकेर नेपाली टिम मालेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दासम्म टुंगो थिएन, उनी अहिले तत्कालका लागि काठमाडौं जाने छन् वा जाने छैनन् भनेर । जतिबेला टिम काठमाडौंमा ओर्लियो, त्यसमा अल्मुताइरी थिएनन् । पछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले सामाजिक सञ्जालमा कतारमा उनलाई भेटेको तस्बिर पोस्ट गरे । त्यसमा अध्यक्ष शेर्पाले स्टाटस लेखे, ‘नेपाली टिमलाई थप मजबुत बनाउन छलफल गरेको ।’
यी सबै परिदृश्यबीच के बुझ्ने त ? केही न केही । उनको भविष्यलाई लिएर अन्योलता छाएकै छ । प्रशिक्षक अल्मुताइरीको बानी नै हो कि ? एकथोक बोल्ने । त्यसमा कायम नरहने । स्टन्टबाजीमा उनलाई खास रुचि देखिन्थ्यो । बंगलादेशमाथिको जितपछि उनले अमूक नेपाली पत्रकारलाई भनेर गाली पनि गरे । हुँदाहुँदै ‘म्याच फिक्सिङ’ को कुरा पनि निकाले । अब यो प्रसंग कहाँबाट कसरी आयो, कसैलाई अहिलेसम्म पत्तो छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी खुबै सक्रिय हुने गर्छन् । उनको एक स्टाटसमा हजारौं लाइक आउँछ । कमेन्ट आउँछ । त्यो पनि ठाउँका ठाउँ । उनले नेपालीको मन कसरी जित्ने र यस्तो गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । त्यसैअनुसार उनी काम पनि गर्छन् । अब त अल्मुताइरीबारे केही लेख्नुपर्छ, समर्थनमा होस् वा विरोधमा तुरुन्तै उनका प्रशंसक खनिइहाल्छन् ।
खेलाडी भनेपछि ज्यान फाल्ने प्रशिक्षक
नेपाली फुटबलले अहिलेसम्म जति पनि प्रशिक्षक पाए, त्यसमध्ये कम्तीमा पढाइका हिसाबमा अल्मुताइरी अब्बल प्रशिक्षक नै हुन् । त्यसो भनेको उनीसँग एएफसीको प्रो लाइसेन्स छ । यो ‘ए’ लाइसेन्स भन्दामाथिको हो । कतारी फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आएका यी कुवेती प्रशिक्षकको सबैभन्दा राम्रो गुन भनेकै आफ्नो टिम र आफ्ना खेलाडी भनेपछि ज्यानै फाल्नु हो । खेलाडीसँग कुरा गर्ने हो भने उनीहरू अल्मुताइरीको प्रशंसा नै गर्छन् ।
टिमको अभ्यास र प्रशिक्षण गर्ने पारा त राम्रो भयो नै । उनी भन्छन् पनि, ‘पराजित भए ‘दोष जति मेरो, जितको श्रेय जति खेलाडीको ।’ अल्मुताइरी खेलाडीसँग ‘वान टु वान’ कुरा गर्छन् । खेलाडीको समस्या आफ्नै हो जस्तो गर्छन् । आधुनिक फुटबल व्यवस्थापकको यो पछिल्लो ट्रेन्ड नै हो । खेलाडीका व्यक्तिगत समस्या हुने गर्छन्, त्यसबारे पनि उनी खुलेर कुराकानी गर्छन् । अझ भविष्यमा केही समस्या भए ‘आफू हुनेछु’ भनेर पनि भन्छन् ।
खेलअगाडि ‘माइन्ड गेम’ उत्तिकै खेल्छन् । प्रतिद्वन्द्वी टिमलाई उक्साएर होस् कि तिनको खिल्ली उडाएर । टिम आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण राख्छन्, आफूलाई नसोधीकन केही गर्न दिँदैनन् । टिमका अन्य सबै सदस्य पनि उनीदेखि सावधान छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, आफ्नो पछाडि अल्मुताइरीले सुराकी छाडेको छ । कसरी हो, टिममा केही भयो कि खबर प्रशिक्षकसम्म पुगिहाल्छ । फेरि नेपाली टिममा धेरै विदेशी प्रशिक्षक आए र गए । तर, उनी नै पहिलो त्यस्ता प्रशिक्षक हुन्, जसले नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुर्‍याए ।
उनी अधिकांश समय हाफ पाइन्टमै देखिन्छन् । एकैपल्ट पाइन्ट लगाए । त्यो अवसर थियो, काठमाडौं आएयताको पहिलो प्रेस मिट । त्यसमा उनी भन्थे, ‘म तीन कुराको बचन दिन्छु, नेपाली टिमलाई आक्रमण गर्न सक्ने बनाउनेछु, टिमलाई साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुर्‍याउनेछु अनि टिमलाई एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण पनि पुर्‍याउनेछु ।’ उनले यी काम भने गरेका छन् । त्यस अर्थमा उनको प्रशंसा हुनुपर्छ । उनले कामै गरेर देखाएका छन् ।
कफी, सिगरेट र अल्मुताइरी
व्यक्तिगत रूपमा अल्मुताइरी कस्ता छन् त ? जतिबेला उनी कफी पिउँछन्, सँगै सिगरेट पनि हुनुपर्छ । तब खुबै खुल्छन् । उनको प्रिय हो, लाटे । अनि सँगै एक खास ब्रान्डको विदेशी सिगरेट पनि चाहिन्छ । यी दुईको मदतमा उनी रातभर कुरा गर्न सक्छन् । बंगलादेशविरुद्धको खेलपछि उनी भन्थे, ‘तीन रात भयो, म सुत्न पनि सकेको छैन ।’ एकपछि अर्को लाटे पिएपछि अनि सिगरेट खाएर चिम्नी भट्टाजस्तै पारेपछि कसरी निद्रा लाग्छ र ?
उल्टै नशालु देखिन्छन् अनि त्यसलाई सुहाउने गरेर गोलको खुसियाली मनाउने गर्छन् । तनावचाहिँ उनलाई खुबै लाग्छ । मानौं, तनावसँग उनले मित लगाएका छन् । काठमाडौं छँदै केही चित्त बुझेन भने आफू बसेको होटल छाड्थे र कता हो कता हराउँथे । फेरि बिहान पुरानै होटलमा आइपुग्थे र ब्रेकफास्टमा सहभागी हुन्थे । उनी आफू नजिककासँग भन्थे, ‘तनाव भयो भने मलाई एकान्त चाहिन्छ ।’ नितान्त एकान्तमा आराम लिन्छन्, नानाथरि सोच्छन् र त्यसको समाधान पनि निकाल्छन् ।
साफ फाइनल सकेपछि उनी यस्तै भन्थे, ‘मलाई आराम चाहिएको छ ।’ कतारमा बसेर उनी यस्तै कफी र सिगरेटसँगै सोचिरहेका होलान् के गर्ने भनेर ? फेरि उनी उत्तिकै मिजासिला छन् । साफ च्याम्पियनसिप २०२१ मा आफू नै सबैभन्दा ह्यान्डसम प्रशिक्षक भएको दाबी पनि गरे । माल्दिभ्सका एक पत्रकारले उनलाई दुई प्रश्न सोध्न चाहेको बताएका थिए । त्यसको उत्तरमा अल्मुताइरी भनेका थिए, ‘म आफ्नै श्रीमतीलाई त दिनमा एक प्रश्न सोध्ने अवसर दिन्छु । अहिले किन तपाईंलाई दुई प्रश्नको अवसर दिने ?’
अल्मुताइरीले मित त विवादसँग पनि लगाएको देखिन्छ । नेपाल छाड्नु अगाडि उनले विवादै गरिरहे । फेरि एन्फाकै एक तप्काले उनलाई उक्साउने काम गरेकै थियो । आफूतिर मिल्न आए, लामै समय प्रशिक्षकको अनुबन्धन गर्ने लोभ पनि देखाएकै थिए । सायद अल्मुताइरी यस्ता पहिलो प्रशिक्षक हुन्, जसले खुलेर सबैले देखिने गरी यस्ता प्रवृत्तिको विरोध जनाए । यो आवश्यक पनि थियो । अब त्यो समूहलाई ‘माहोलमा खेल्न’ सजिलो हुने छैन ।
यस्तै घटनाक्रमबीच केहीले नेपाली फुटबल आफूले नै चलाएको र स्थिति सामान्य गर्न प्रयास गरेको गफ दिन भ्याए । अल्मुताइरी कसरी नेपाल आए भनेर बुझ्दै नबुझ्काले लामा–लामा गफ चुटे र आफू ठूलो हुन खोजे । फेरि यस्तै केही खेल नै नहेरेर अल्मुताइरीको खुबै गुनगान गाउने निस्के । उनलाई नाम चलेका केही विदेशी प्रशिक्षकसँग जोडेर प्रशंसा पनि गरे । तर यी प्रशिक्षक यस्ता गुनगानले छुने खालका छैनन् । बरू केहीले अल्मुताइरीको प्रशंसा गरेर एन्फाको संस्थापन पक्षलाई खुसी पार्ने काम गरिरहे ।
अल्मुताइरीलाई लिएर मूल कुरा यही हो, यी प्रशिक्षकले नेपाली फुटबलका लागि राम्रो गरेका छन् भने अरूलाई किन खेल्न दिने । भनिन्छ, फुटबलमा तथ्यांकले बोल्ने गर्छ । तथ्यांकले भन्छ, उनी नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुर्‍याउने पहिलो प्रशिक्षक हुन् । खेलाडीलाई पनि उनी उत्तिकै मनपर्छ । एक हदसम्म एन्फाको संस्थापन पक्ष भने उनीदेखि खुसी छ । अब के चाहियो र ? खासमा नेपाली फुटबललाई उनी जत्तिको प्रशिक्षक चाहिन्छ ।
उनले नेपाली फुटबल सम्हालेको धेरै भएको छैन । फुटबलमा प्रतिफल पाउन प्रशिक्षकलाई चित्तबुझ्दो समय दिनैपर्छ । कोही कसैले एक प्रतियोगितामै केही गर्नसक्ने भन्ने हुन्न । त्यसैले अल्मुताइरीलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ । उनकै नेतृत्वमा नेपालले एसिया कप छनोटको तेस्रो चरण खेल्नुपर्छ । हाम्रो भन्नु खालि यत्ति हो, किन अनावश्यक स्टन्टबाजी गर्ने ? किन अनावश्यक अन्योल सिर्जना गरिरहने ? हामीले सानोमै ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ भन्ने कथा पढ्नुपर्छ ।
त्यसमा मुख्य पात्रले गाई चराउन जाँदा गाउँलेलाई झुक्याएर मज्जा लिन दुईपल्ट बाघ आएको हल्ला फैलाउँछन् । जतिबेला साँच्चै बाघ आउँछ, गाउँलेले तिनको विश्वास नै गर्दैनन् । गोठालाले जति गुहार लगाए पनि । अल्मुताइरीले पनि कतै आफ्नो बचन खेर पठाइरहेका त छैनन् ? सम्बन्धमा ‘गिल्टी प्लेजर’ भन्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्दा खुसी त हुनुपर्छ नै । त्यो भनेको ‘प्लेजर’ भयो । तर यसमा ‘बात’ लाग्ने गरेर किन काम गर्ने, दोष लगाउने ठाउँ दिएर ? ‘गिल्टी’ महसुस गर्न अवसर नै नदिऔं ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०९:१९